CiderTV, chengetedza yako Apple TV kubva kuNotification Center | IPhone nhau
CiderTV, chengetedza yako Apple TV kubva kuNotification Center
Sezvo iOS 8, iPhone, iPod Touch kana vashandisi vePadad vane majeti aripo. Sezvinotarisirwa nekambani yeCupertino, Apple yaisada kuti aya majeti akanganise dhizaini yeIOS uye izvo zvavakaita kutibvumidza kuti tivawedzere muNotification Center. Kune rimwe divi, Apple inotibvumidza kudzora yechina chizvarwa Apple TV neiyo Remote application. Chii chimwe chinhu chine chekuita nechimwe? Zvakanaka, pane iko kunyorera CiderTV izvo zvinotibvumidza isu kudzora Apple TV kubva kuNotification Center.
Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti ini handifarire zvakawandisa zvakanyanya, ndinofanirawo kubvuma kuti kune mamwe anobatsira kwazvo. Mune yangu nyaya, kudzamara Apple yawedzera mazwi muApple Music, chimwe chinhu chataigona kuona muIOS 10, ini ndinongoshandisa imwe chete, iyo kubva kuMusixmatch iyo inonditendera kuti ndiverenge mazwi erwiyo rupi nerupi runonzwika mune rwekushandisa. Kune avo vaunoifarira zvishoma, CiderTV inokutendera iwe kuti ukwanise kuwana chishandiso chinoita chaizvo zvakafanana nekushandisa kure of Apple.
CiderTV, Remote muChiziviso Center
Kana CiderTV yaiswa chete tinofanirwa kuimisa kuitira kuti igone kushanda neApple TV yedu 4. Tichazviita nekutevera nhanho idzi:
Isu tinovhura iyo CiderTV application.
Isu tinobaya pane yekuwedzera chiratidzo (+) iyo ine tsvuku kabhaluni ine nhamba 1.
Takatamba pazita reApple TV yedu.
PaApple TV, ngatiitei Zvirongwa / Kudzora uye zvishandiso / Remote app.
Pano tinosarudza "CiderTV - yedu iPhonename".
Isu tinopinda nhamba kuti tibatanidze zvishandiso. Muchiitiko changu yaive 1111.
Iye zvino tave kugona kudzora Apple TV neCiderTV kubva kuNotification Center kana kubva kuchishandiswa pachayo, icho chakafanana chaizvo neApple Remote application.
CiderTV inotibvumidzawo kudzora vhoriyamu yeTV, senge Siri Remote, asi nekuda kweizvi iwe unofanirwa kuve neTV inoenderana uye nekuimisa kubva pazviruva. Kana iwe uchizviedza, uye zviripo nekuti kunyorera kuri mahara, usazeze kupindura uchitaura zvaunofunga.
ZVAKAITWA: Sekutaura kwemushandisi ian osses (Kutenda ketsamba 😉), ichi chishandiso chinoenderanawo neyechipiri neyechitatu chizvarwa Apple TV. Ehezve, ini pachezvangu handikwanise kusimbisa maitiro ekubatanidza zvese zvishandiso nekuti ini handina yekutanga set-yepamusoro bhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » CiderTV, chengetedza yako Apple TV kubva kuNotification Center
ian osses akadaro
Simbisa kuti inoenderanawo neApple TV 2 uye Apple TV 3
Pindura kune ian osses
Zvingave zvakanaka kuisa musoro wenyaya nenzira kwayo. Iyo haina kudzora terevhizheni asi iyo Apple TV. Ndingadai ndakazvinunura ini ndichiverenga nhau.
Iyo Motorola Moto Z isina 3.5mm jack Zvino chii?